Ebe nchekwa ihe nchọgharị Vivaldi - LinuxCapable
Vivaldi bụ freeware, ihe nchọgharị webụ cross-platform nke Vivaldi Teknụzụ mepụtara. O tolitere site na ọdịda Opera na ọtụtụ iwe were iwe mgbe ọ gbanwere site na injin nhazi Presto gaa na ihe nchọgharị dabere na Chromium. Ikpo okwu a kpasuru ndị ọrụ Opera ọdịnala iwe. Kemgbe ahụ, Vivaldi abụrụla otu n'ime ihe nchọgharị ịntanetị kachasị ewu ewu n'etiti…
Categories Nkume linux Tags Nkume Linux 8, Nchọgharị Vivaldi
Tọzdee, Disemba 28, 2021 by Jọshụa James
Categories openSUSE Tags megheSUSE Leap 15, Nchọgharị Vivaldi
Vivaldi bụ freeware, ihe nchọgharị webụ cross-platform nke Vivaldi Teknụzụ mepụtara. O tolitere site na ọdịda Opera na ọtụtụ iwe were iwe mgbe ọ gbanwere site na injin nhazi Presto gaa na ihe nchọgharị dabere na Chromium. Ikpo okwu a kpasuru ndị ọrụ Opera ọdịnala iwe. Kemgbe ahụ, Vivaldi abụrụla otu n'ime ndị ama ama…
Categories Pop! _OS Tags POP! _OS 20.04, Nchọgharị Vivaldi
Tuesday, October 12, 2021 Tuesday, October 12, 2021 by Jọshụa James
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Nchọgharị Vivaldi
Wednesday, November 3, 2021 Sunday, October 10, 2021 by Jọshụa James
Categories Fedora Tags Fedora 34, Nchọgharị Vivaldi
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Nchọgharị Vivaldi
Tuesday, October 12, 2021 Sọnde, Septemba 12, 2021 by Jọshụa James
Vivaldi bụ freeware, ihe nchọgharị webụ cross-platform nke Vivaldi Teknụzụ mepụtara. O tolitere site na ọdịda Opera na ọtụtụ iwe were were gbanwee site na injin nhazi Presto gaa na ihe nchọgharị dabere na Chromium, ikpo okwu kpasuru ndị ọrụ Opera ọdịnala iwe. Kemgbe ahụ, Vivaldi abụrụla otu n'ime ihe nchọgharị ịntanetị kachasị ewu ewu…
Categories Ubuntu Tags Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, Nchọgharị Vivaldi